Digital Citizen 2.8 (Olom-Pirenena Nomerika) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2015 12:57 GMT
Saripikan'ny faravodilanitry ny tanànan'i Kaoety, nalain'i Cajetan Barretto, CC BY-NC-SA 2.0
Ny 15 Aprily, nanamafy ny fanasaziana an-tranomazina mandritry ny enim-bolana an'ilay mpikatroka mafàna fo momba ny asa, Rachid Aouine, ny fitsaràna iray tao Alzeria. Tamin'ny volana lasa iny i Aouine dia voaheloka ho “nikotrika famoriam-bahoaka tsy mitam-piadiana” tao anaty fanavaozana sata tamin'ny Facebook. Ilay lahatsoratra maneso dia valinteny ho an'ny fanambaràna iray avy amin'ny governemanta, nampitandrina ireo manampahefana mpampihatra lalàna tsy handray anjara amin'ilay fihetsiketsehana. Nanoratra i Aouine hoe: “Ry manamboninahitry ny polisy, nahoana ianareo no tsy mivoaka androany mba hanao hetsi-panoherana ny fanapahankevitra tsy ara-drariny manjo ny mpiara-miasa aminareo…, fa tsy ilaozana misava/manara-maso ireo mpikatroka malalaka sy ireo mpanao hetsi-panoherana manohitra ny entona “shale” ?
Ny 14 Martsa, Ghada Jamsheer, bilaogera iray sady mpanao fanentanana momba ny zon'ny vehivavy sy ny ara-pinoana, dia nosakanana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena tao Bahrain raha iny teny an-dàlany hanaraka fitsaboana tany Frantsa iny indrindra. Ny fanapahankevitra hanakana azy tsy hivoaka dia fampiharana ny didy iray navoakan'ny lehiben'ny fampanoavana. Tsy nisy fanazavana nomena. Tany amboalohany dia efa nohadihadian'ny departemanta misahana ny fanadihadiana mikasika resaka heloka bevava eletronika i Jamsheer noho ny nandefasany bitsika momba ny kolikoly ao amin'ny hopitaly iray tantanan'ny fianakavian'ny mpanjaka ao Bahrain.
Neken'ny governemanta ny tolodalàna iray momba ny heloka bevava mifehy ny tontolon'ny cyber ary natolony hakàna ny fankatoavan'ny lapam-panjakana. Efa nokianina hatrany ity tolodalàna ity hoe mikiky ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra.
Araka ny voalazan'ny Alaraby, ny fitenenan-dratsy sy ny heloka bevava elektronika natao ho entina hanohintohinana ny filaminam-bahoaka, mampidi-doza ho an'ny fitoniana sy ny filaminan'ny fiarahamonina, manimba ny firaisam-pirenena sy ny fandriampahalemana sosialy, dia iharan'ny sazy famonjàna mandra-maty. Faritan'ilay tolodàlana fa tafakatra hatramin'ny famonjàna mandritry ny telo taona ny fijirihana imailaka, vaovao mikasika olona manokana na ny governemanta ary ny fandrisihana ho amin'ny asa fampihorohoroana. Tsy takian'ilay tolodalàna ny tsy maintsy hisoratana anarana ataon'ireo tranonkala any amin'ny manampahefana, fa ny fitanisàna ireo sazy noho ny fanelezana tsaho no ataony.
Ny 11 Aprily, nohelohin'ny fitsarana iray tao Kairo higadra mandra-maty ny tale mpanatanteraky ny tranonkalam-baovao Rassd, Abdullah al-Fakharany, sy ny mpiara-manorina ilay tranonkala, Samhi Mustafa, miaraka amin'ilay mpanolotra fandaharana amin'ny TV Amgad , Mohamed al-Adly. Nosamborina ny Aogositra 2013 izy telo ireo, tapa-bolana taorian'ny nanaparitahana tao amin'ny Kianja Rabaa Al-Adawiya tao Kairo ireo mpanohana ny filoha teo aloha Mohamed Morsi izay nifamory nanao fitorevahana tao mba hanohitra ny nanonganan'ny tafika azy. Nampangaina ho niara-niasa tamin'ny Firahalahiana Miozolmana, izay voaràra ankehitriny, izy ireo, mba hanohintohina ny tafika ao Ejipta sy ny governemantany. Ny talen'ny fifandraisana amin'ny daholobe ao amin'ny Rassd koa, Amrou Faraj, dia nahazo sazy mandra-maty, na tsy nanatrika ny fitsaràna aza. Nanagadra mpanao gazety marobe ny manampahefana Ejiptiana taorian'ny famoretana nataony an'ireo nanao fitorevahana, isan'ireny ilay mpakasary miasa tena, Mahmoud Abou Zeid, fantatra amin'ny hoe Shawkan, izay vao haingana no nahafeno ny 600 andro mahery niainany am-ponja tsy nandalo fitsaràna. Voasambotra tamin'ny Aogositra 2013 ihany koa i Shawkan, raha teo am-pandrakofana ny fifandonana nisy teo amin'ny mpitandro filaminana Ejiptiana sy ireo mpanohana an'i Morsi, niasa ho an'ilay tranonkalan'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra Demotix.
Nanambara ny Minisitra misahana ny fifandraisan-davitra ao Iraka, Hassan Rashed, fa hapetraka hihatra manomboka ny Jona ho avy izao ireo fepetra vaovao hanarahana maso ny famoahana vaovao ety anaty aterineto. Tsy mazava tsara hoe inona marina ireo fepetra vaovao ireo, sy ny hoe ho ampiharina fotsiny amin'ireo media ety anaty aterineto ve sa izay rehetra mpampiasa aterineto ao amin'ny firenena.
Ny 5 Aprily, nohamafisin'ny Fitsarana Tampony Ao Kaoety ny roa taona sazy an-tranomaizina azon'i Ayyad al-Harbi, ilay mpikatroka mafàna fo avy amin'ny mpanohitra izay nandefa bitsika nanakiana ny mpitondra firenena. Al-Harbi, izay sady mpanao gazety ihany koa ao amin'ny tranonkalam-baovao Sabr dia hatramin'ny volana May tamin'ny taona lasa no efa any am-ponja noho ny filazàna azy ho nibitsika andàlana avy aminà tononkalo iray manakiana ireo mpitondra any amin'ny tany Arabo. Ny androtr'io ihany, mpikatroka mafàna fo roa hafa no nafahana taorian'ny nandalovany fakàna am-bavany naharitra dimy andro noho ireo bitsika nalefany momba ireo mpitari-tafika Saodiana manao hetsika any Yemen.
Ny 4 Aprily, tsy afaka nidirana tety anaty aterineto ny Al-Akhbar, tranonkalam-baovao akaiky ny elatra havia, vokatry ny fanafihana DDoS nanjo azy. Toherin'ity famoahana ity ny ady amin'izao fotoana izao atao amin'ireo Houthi mpihoko any Yemen. Andro iray nialoha ilay fanafihana DDoS, nitatitra ny gazety Al-Watan ao Arabia Saodita fa ny masoivohom-panjakany ao Beirut dia mikasa ny hanao fitoriana ny Al-Akhbar ary nitanisa ny tenin'ny ambasadaoro hoe “tonga izao ny fotoana hamaranana azy ity”.
Tsikaritry ny Check Point, orinasa misahana fiarovana amin'ny Teknolojian'ny Fampahalalam-baovao, ny fisianà ampahanà rindrambaiko fijirihana heverina ho eo ambany fiahian'ny governemanta Libane na vondrona politika iray ao amin'ny firenena. “Explosive” no anaran'ilay rindrambaiko fijirihana ary manome fahafahana ho an'ireo mpanafika hiditra avy lavitra amin'ireo fitaovan-tserasera kinendriny, ahafahan-dry zareo mahita izay ataony sy lazainy ety anaty serasera. Ireo fikambanana ao Israely sy ireo firenena manodidina azy, toy ireo mpisahana fiarovana, orinasam-pifandraisan-davitra, famoaham-baovao ary toeram-pampianarana ambony no tena isan'ny lasibatr'izy io.
Vohitra Libane miisa roanjato, izay samy misy mponina maherin'ny 200.000 avy, no tsy mahazo aterineto haingam-pandeha, araka ny tatitra iray navoakan'ny gazety An-Nahar mpiseho isanandro.
Ny 31 Martsa, nosazian'ny fitsarana iray ao Rabat renivohitra higadra folo taona sy handoa onitra 4.057 dolara i Hicham Mansouri, mpisolovava ny fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety, noho ny vesatra fijangajangana mahazo azy, fiampangana izay lazain'ireo namany fa noforomporonina. Mpitantana ny tetikasan'ny Fikambanana Maraokana ho an'ny Asa Fanaovana Gazety Mpanadihady (AMJI) i Mansouri, fikambanana iray izay mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahafahana mahazo vaovao ary ny asa fanaovana gazety manadihady. Nialohan'ny nisamborana azy dia teo am-pandrafetana tatitra iray momba ny lazaina fa fitsikilovana ataon'ny manampahefana Maraokana amin'ny aterineto ampiasain'ireo mpikatroka mafàna fo sy ireo mpanao gazety izy. Ny 7 Aprily, nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina i Mansouri ho fanoherany ny fiampangàna azy.
Nosamborin'ny polisy tao amin'ny faritanin'i Taroudant ny mpikatroka iray antsoina hoe Alhassine Boujeghmat noho ny nanoratany tao amin'ny Facebook momba ny fahasarotam-piainana ao amin'ny vohitra misy azy sy ny nanakianany ireo manampahefana ao an-toerana.
Ny 7 Aprily, vondrona fiarahamonim-pirenena niisa telo no nanambara ny fandefasana tamin'ny fomba ofisialy ny marsadhouriyat.org, sehatra iray ety anaty aterineto natao hanarahana maso ny fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny media.
Tohizan'ireo manampahefana Omani ny fanaovana lasibatra ireo mpikatroka mafàna fo sy bilaogera noho ny fitenenan'izy ireny momba ny fanitsakitsahana ny zo ety anaty aterineto.
Efatra ireo mpikatroka mafàna fo avy ao Liwa any avaratry ny firenena no voasambotra taorian'ny nitakian'izy ireo ny hamotsorana an'i Taleb Al-Maamari, solombavambahoaka izay efa any am-ponja hatramin'ny Aogositra 2013 noho ny nandraisany anjara tamin'ny hetsi-panoherana iray manohitra ny fandotoana ny tontolo iainana. Nosamborina tamin'ny 5 Aprily ry Majid Al-Bloushi, Abdullah Al-Kundi, ary Saed Al-Khouros, raha andro iray taorian'izay kosa i Mohammed Al-Manaee. Tazonina aminà toerana tsy fantatra ireo mpikatroka mafàna fo miisa efatra ireo ary tsy avela hifanerasera amin'ny mpisolovava azy.
Mandritra izany fotoana izany, nosandaina vola ny famotsorana an'ilay mpiaro ny zon'olombelona, Saed Jadad, tamin'ny 7 Aprily. Voaheloka telo taona am-ponja i Jadad tamin'ny Martsa, noho ny nandefasany taratasy ho an'i Barack Obama, filohan'i Etazonia. Tao anatin'ilay taratasy navoaka tety anaty tranonkala tamin'ny 31 May 2013, nokianin'i Jadad ny politika amerikana momba ny zon'olombelona any amin'ireo firenena ao amin'ny Gôlfa. Tanaty tranga iray hafa, voaheloka higadra herintaona izy noho ny filazana azy ho nanitsakitsaka ny lalàna momba ny heloka bevava atao amin'ny alàlan'ny cyber ao amin'ny firenena.
Ny 6 Aprily, nitatitra ny Sehatra Siriana Fanarahana Maso ny Zon'Olombelona—vondrona fanarahana maso izay mandrakitra ireo fanitsakitsahana zon'olombelona mitranga mandritry ny fifandirana Siriana misy amin'izao fotoana izao— fa manao be fiavy any amin'ireo kafe-aterineto ao an-tanànan'i Deir Ezzor ireo milisin'ny ISIS, nangihy ireo solosaiana sy nisambotra olona 15.
Mazen Darwish, ilay tale voafonja avy ao amin'ny Ivontoeran'ny Gazety Siriana sy ny Fahalalahana Maneho Hevitra (SCM) dia notolorana ny Loka 2015 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom . Darwish miaraka amin'ireo namany Hani Al-Zitani sy Hussein Gharir dia efa hatramin'ny 2012 no any am-ponja ary nampangaina ho “namoaka vaovao mahakasika hetsika fampihorohoroana” ho an'ny hetsik'izy ireo momba ny zo, ka tafiditra ao anatin'izany ny fanarahana maso ny vaovao ety anaty aterineto sy ny famoahana tatitra momba ny zon'olombelona. Ny 15 Aprily, nahemotry ny fitsaràna ao Damaskaosy misahana ny resaka fampihorohoroana ny famoahana didy momba ny raharahan'i Darwish, Al-Zitani ary Gharir, fanemorana faha-iraikambiroapolo.
Ny 16 Aprily, nodidian'ny mpitsara iray ny hamotsorana arahana fepetra ho an'ilay bilaogera Yassine Ayari, izay voasambotra tamin'ny Desambra lasa teo noho ny faniratsiràna ny tafika tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook. Voalohany i Ayari no voaheloka nandritry ny fitsaràna tsy natrehany tamin'ny Novambra lasa iny, hifonja telo taona an-tranomaizina, talohan'ny nampihenana ny saziny ho herintaona nandritry ny famerenana ny fitsaràna natao tamin'ny Janoary. Tamin'ny Martsa, nahenan'ny fitsarana mpandrava didy ho enina volana ny saziny.
Notohizan'ny Yemen Net, an'ny fanjakana, ilay goavana indrindra amin'ireo mpanome tolotra aterineto ao amin'ny firenena, ny fibahanana ireo tranonkala mifandraika amin'ny fandrakofan'izy ireo ny ady ifanaovana amin'ireo Houthi mpihoko ary tarihan'ny Saodiana. Ny mpihoko izao no mifehy an'i Sana'a renivohitra sy ny biraon'ny governemantany, isan'izany ny ministeran'ny fifandraisan-davitra sy ny fampitam-baovao. Taorian'ny fibahanana marobe tamin'ireo fikarohana tranokalam-baovao tao an-toerana, tany amin'ny faran'ny volana Martsa, dia voabahana ihany koa ny tranonkala tambajotram-baovaom-paritry ny Al Jazeera sy Al Arabiya tamin'ny 7 Aprily.
Tany anaty vaovao hafa
Avy any anaty efitrano ifonjàny, mandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'i Etazonia i Nabeel Rajab.
Kirolos Nathan, avy amin'ny Ivontoerana momba ny Zon'Olombelona ao Kairo, dia manoratra momba ny valinteny faran'izay henjana avy amin'ireo governemanta Arabo manohitra ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto.
Avy amin'ireo mpifanolo-tànana aminay
Navoakan'ny EFF ny playlist misy ny Fanarahana Maso ny Fiarovantena ho an'ireo tanora LGBTQ.
Ny Advox, Access, EFF, Social Media Exchange, sy 7iber.com no mitondra ho anao ny Digital Citizen . Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Mohamed ElGohary, Amira Al Hussaini, Thalia Rahme, Hayder al-Shakeri, ary Jillian C. York no nikaroka ny tatitra tamin'ity volana ity, ary Mohamed ElGohary no nandika azy ho amin'ny fiteny Arabo.
Saripikan'ny faravodilanitry ny tanànan'i Kaoety, avy amin'i Cajetan Barretto, CC BY-NC-SA 2.0.